Tranofiara vaovao 'miverina amin'ny rà 4' feno zombies marobe mahazo tombony
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Tranofiara vaovao 'miverina amin'ny rà 4' feno zombies marobe mahazo tombony
by Trey Hilburn III Jona 10, 2021
Warner Bros. Lalao sy Turtle Rock Studios ' Ra 4 miverina ambony ao amin'ny lisitry ny lalao hetsika mpilalao marobe antenaina indrindra amin'ity taona ity. Tsy dia lavitra koa ny fiandrasana hatramin'ny Oktobra. Fihetsiketsehana fohy fotsiny, mitsambikina ary mitsambikina. Ny tranofiara farany farany ho an'ny Ra 4 miverina avo roa heny amin'ny famonoana betsaka ny zava-drehetra tsy maty eo am-pelatananao sy ireo mpiara-miasa aminao.
Ny synopsis ho an'ny Ra 4 miverina mandeha toy izao:
Back 4 ra dia mpitifitra zombie mpiara-miasa voalohany avy amin'ireo mpamorona ny havia malaza be mpitsikera 4 Fialan-tsasatra maty ary manasongadina lalao gameplay mampientanentana sy mampihetsi-po ary hetsika miovaova be sy miovaova be mba hitazomana ny mpilalao ho avy indray ho an'ny Bebe kokoa. ny Back 4 ra Ny tantara dia nitranga taorian'ny valan'aretina mahatsiravina izay ny ankamaroan'ny zanak'olombelona dia novonoina na voan'ny otrik'aretina Devoly Worm. Nihamafy tamin'ny hetsika tsy hay lazaina ary sahisahy miady ho an'ny ny farany zanak'olombelona, ​​vondron'ireo veterana apokalypsa antsoina hoe Cleaners dia nivondrona mba handray ireo horohoro voan'ny aretina antsoina hoe Ridden ary hamerina an'izao tontolo izao.
Afaka mandeha ianao ETO to misoratra anarana ny tenanao hilalao ny lalao amin'ny voalohan'ny beta. Ny 5-9 aogositra dia nahita ny fisokafana mialoha amin'ny fisokafana ary ny beta misokatra mahazatra dia hidina ny 12-16 Aogositra.
Back 4 ra dia misy ho an'ny Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ary PC manomboka 12 Oktobra.
He-Man dia niverina ary nandeha nankany Netflix niaraka tamin'ny Masters of the Universe: Revelation. Vakio bebe kokoa eto.
Ra 4 miverinaGamesLeft 4 DeadXbox OneXbox andian-tsarimihetsika X
'Masters of the Universe: Revelation' Trailer dia manome antsika ny maherifo ilaintsika